စွမ်းအင် eReader Pro HD သည်အလွန်စျေးနှုန်းချိုသာသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော eReader ဖြစ်သည် eReaders အားလုံး
စွမ်းအင် eReader Pro HD သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် eReader ဖြစ်သည်
Villamandos | | စာဖတ်သူများ
Amazon ၏အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များသို့မဟုတ် eReaders စျေးကွက်တွင် Kindle နှင့်လက်တွဲသော်လည်းကုမ္ပဏီအချို့သည်၎င်းကိုခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ထုတ်ကုန်ပုံစံဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ရှိနေသေးသည်။ ၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာစပိန်စွမ်းအင်စနစ်ဖြစ်ပြီးဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသစ်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် စွမ်းအင် eReader Pro HD ဒီနေ့ဒီဆောင်းပါးမှာအသေးစိတ်လေ့လာမယ်။
ဒီပစ္စည်းသစ်ကိုစျေးကွက်ထဲမှာaသေးငယ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားသေချာစွာဒီဇိုင်းဆွဲ။ ၊ eBooks နှင့်စွမ်းရည်မြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းမမြင့်မားသောကြောင့်ဖြစ်သည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းကဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးနိုင်မယ့်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း။ ဒီစွမ်းအင် eReader Pro HD ကိုသင်နက်နက်နဲနဲသိချင်ရင်ဆက်ဖတ်ပါ၊ သင်၌ eReader မရှိသေးဘူးဆိုရင်၊ သတိထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆောင်းပါးမကုန်မီသင်၌တစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်သည်။
3 စွမ်းအင် eReader Pro HD; အပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံထက်ပိုပြီး
5 ၎င်းသည် Kindle မဟုတ်သော်လည်းစွမ်းအင် eReader Pro HD သည်နီးကပ်သည်
ဒီစွမ်းအင် eReader Pro HD ၏အထူးခြားဆုံးအချက်များအနက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အပြီးသတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Energy Sistem သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကပင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူအတွက်အလွန်အဆင်ပြေသည်။ ဒီ eReader မှာအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး 205 ဂရမ်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုဘဲဘောင်းဘီ၏နောက်ကျောအိတ်ထဲမှာတောင်သယ်ဆောင်သွားမှာပါ။ အထူမူကား ၀.၈ စင်တီမီတာ (သို့) အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောကိရိယာဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအလွန်စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေသည်။
ပြင်ပတွင်ကျွန်တော်တစ် ဦး ရှာပါ ၆ လက်မအရွယ်ဖန်သားပြင်သည်၎င်းကိုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိစေသောဖန်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ နောက်ကျောကိုရော်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ရာတွင်အလွန်ချုပ်ကိုင်ထားသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အရှေ့ဘက်တွင် eReaders တွင်ရောက်ရှိမှုနည်းပါးသောစာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ဂန္ထဝင်ခလုတ်ကိုတွေ့ရသည်။
ဤကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများအားလုံးသည်တရား ၀ င်ပစ္စည်း၏တရားဝင်အဖုံးဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်နှင့်သင်၏နေ့စဉ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် eReader ၏အသုံး ၀ င်သောသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်မမျှော်လင့်သောပြtroublနာများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ကိရိယာ၏တရားဝင်အဖုံးဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။
နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာပါ စွမ်းအင် eReader Pro HD ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မရှိပြီး resolution အနေဖြင့် ၇၅၈ x ၁၀၂၄ ပစ်ဇယ်နှင့်အတူ6dpi
နည်းပညာ - မီးခိုးရောင်အီလက်ထရောနစ်မင် ၁၆ လုံးပါသော Eink Carta HD
အလင်း - ဖန်သားပြင်သည်ကိုယ်ပိုင်အလင်းဖြင့် illuminated
သိုလှောင်မှုပမာဏ - microSD / SDHC / SDXC ကဒ်များမှ ၆၄ GB အထိသိုလှောင်နိုင်မှု
ပရိုဆက်ဆာ: 1.0GHz dual-core ARM Cortex A9
RAM ကိုမှတ်ဉာဏ်: 512MB
ချိတ်ဆက်မှုများ: USB 2.0, WiFi 802.11n
ဘက်ထရီ - အသုံးပြုမှုကို ၂ လအထိထောက်ပံ့ပေးမည့် milliamps ၂,၈၀၀
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာ: Android 4.1 Jelly Bean
ဖတ်ရှုခြင်းပုံစံများ - TXT, PDF, EPUB, FB2, HTML, RTF, CHM, MOBI
ဒီဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ငါတို့သည်လျှင်မြန်စွာကတပ်ဆင်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည် 1 Ghz dual-core ပရိုဆက်ဆာ၊ 512MB ရှိသည့် RAM မှတ်ဉာဏ်ပါရှိသည်။ စာအုပ်များ၏စာမျက်နှာများကိုလှည့်သောအခါ၎င်းကိုပိုမိုလတ်ဆတ်စေသည့်ပိုမိုအားကောင်းသည့် processor ကိုထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် eReader လုံးဝပိတ်ထားပါကစောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်သည် ၄၅ စက္ကန့်ဖြစ်ပြီး၊
စွမ်းအင် eReader Pro HD; အပြုသဘောဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံထက်ပိုပြီး
စွမ်းအင် eReader Pro HD ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်ရရှိပြီးကတည်းက၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်ညှစ်ရန်၊ ၎င်းကိုထင်မြင်ချက်ကိုပေးနိုင်ရန်နှင့်clichéကဲ့သို့အသံမပါဘဲ၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အထူး eReader အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြသကဲ့သို့ သင်၏ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM သည်အနည်းငယ်တိုတောင်းနိုင်သည်, စာမျက်နှာများကိုချက်ချင်းဖွင့်ရန်မလိုချင်ပါကသို့မဟုတ်ဤကိရိယာနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများမပြုလုပ်လိုသရွေ့၎င်းကိုအီလက်ထရောနစ်စာအုပ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်လုံလောက်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာမျက်နှာကိုဖွင့်ရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသော့များကိုအသုံးပြုပါကတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့်နှေးကွေးမှုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။
ဒီ Energy Sistem ကိရိယာနဲ့ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကငါ့အာရုံကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုက မျက်နှာပြင်၏အလယ်တွင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ ရွေးစရာများနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း။ eReaders အများစုသည်အထက်ထောင့်များတွင်ရှိသောဤမီနူးများကိုသုံးနိုင်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဖုန်းကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ထားစဉ်စာဖတ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ခက်ခဲသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤနေရာမှ စ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုအလျောက်စာမျက်နှာလှည့်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရှာဖွေရေးကိရိယာကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်စာသားပေါ်ရှိအဆင့်မြင့်ဆက်တင်များကိုရယူနိုင်သည်။ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများနှင့်ပြင်ဆင်မှုများကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းနှင့်နေရာသည်အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှု၏နောက်ထပ်မီးမောင်းထိုးပြဘက်ထရီသက်တမ်းသည်။ ကိရိယာကိုအထူးအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအားသွင်းစရာမလိုဘဲရက်များနှင့်နေ့များအတွက်ပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့သည်။ 2.800 mAh သည်ဤစက်ပစ္စည်းအတွက်ပင်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီကုန်သွားမည်၊ အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးဘက်ထရီကုန်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့် charger အားမေ့လျော့သွားမည်ဟုမစဉ်းစားရန်မလိုပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဖန်သားပြင်၏အလင်းရောင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းကိုကျွန်ုပ်မရပ်နိုင်ပါ။ ဤပစ္စည်းမျိုးကိုမကြာသေးမီအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့မခံစားနိုင်ပါ, နှင့်ယခုကနီးပါးလူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ ငါအိပ်ရာပေါ်မှာဖတ်တယ်, ငါသည်ဤ option ကိုမှန်မှန်သုံးပါနှင့်ရိုးရိုးသားသားငါဒီကိရိယာနှင့်အတူပီတိအံ့သြသွားတယ်။ နောက်ကျော backlight point ရှစ်ခု (၃၃%) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်မျက်စိကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်စရာမလိုဘဲနှင့်ဘက်ထရီအလွန်အကျွံမသုံးစွဲပဲအလွန်စာဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။
စွမ်းအင် eReader Pro HD ကိုစျေးကွက်အတွင်းရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရောင်းချပြီး ဖြစ်၍ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်သည် Energy Sistem ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, နှင့်သင်မလွတ်နိုင်သည့်အကြားလူသိများတဲ့အထူးပြုစတိုးဆိုင်အချို့အတွက် အမေဇုံ, ဘယ်မှာကျွန်တော်တစ် ဦး အဘို့ဤစက်ကိရိယာဆည်းပူးနိုင်ပါတယ် ၉.၉၉ ယူရိုစျေးနှုန်း.
ထို့အပြင်ဤ eReader အတွက်အကြံပြုထားခြင်းထက်ပိုမိုသော ၀ ယ်သည် ၁၆.၂၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချသောတရားဝင်အဖုံး သင်၏စွမ်းအင် eReader Pro HD ကိုကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကျောဘက်တွင်မာကျောသောပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏သားရေနှင့်အလွန်ဆင်သောပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ရှေ့ဖက်တွင်ကြော့ရှင်းသည့်ထိတွေ့မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်ကိုမည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုအသုံးပြုနိုင်မည်ကိုမကြောက်ရွံ့ဘဲ ခြစ်ရာသို့မဟုတ်ခြစ်ရာ။
၎င်းသည် Kindle မဟုတ်သော်လည်းစွမ်းအင် eReader Pro HD သည်နီးကပ်သည်
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤစွမ်းအင် eReader Pro HD ကို Amazon Kindle အတွက်ပြောင်းလဲပစ်မည်ဆိုပါကယခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး eReader ဖြစ်နေသည်မှာသေချာပါသည်။ အဖြေကတော့ရှုပ်ထွေးပြီး၊ အချို့သောရှုထောင့်များအရဤစွမ်းအင်စနစ်စက်များသည်မည်သည့် Kindle ထက်သာလွန်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊.
အလွန်ရိုးရှင်းသောရှင်းပြချက်မှာစပိန်ကုမ္ပဏီသည်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုရရှိခဲ့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းများအပြင်အချို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်ပုံစံများနှင့်ဤအရာအားလုံးကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းရဲ့ထုတ်လုပ်သူအားလုံးလိုပဲဒီပစ္စည်းမှာမြန်နှုန်းနည်းပြီး၊ အမေဇုန်လိုမျိုးစာအုပ်ရာပေါင်းများစွာနဲ့ရာပေါင်းများစွာကိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီး၊ ရပ်တန့်စရာမလိုဘဲဖတ်စရာမလိုဘဲဖတ်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရရှိနိုင်ပါတယ် download ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားအရာမရှိပါ။
ဒီစွမ်းအင် eReader Pro HD ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကြောင့် Kindle ရဲ့အဆင့်အထိမရောက်နိုင်သေးပါဘူး။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းဈေးကွက်တွင်အဓိကကစားသမားများဖြစ်လာစေရန်သင့်အားသူတို့ကကူညီပေးမယ်ဆိုရင်မရှင်းရသေးပါ။
စွမ်းအင် eReader Pro HD
ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM မလုံလောက်ပါ
ဒီစွမ်းအင် eReader Pro HD ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ။။ ဤ ၀ င်ရောက်မှုမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာ၊ ကျွန်ုပ်တို့ဖိုရမ်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » စွမ်းအင် eReader Pro HD သည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ် eReader ဖြစ်သည်
Energy Sistem သည်စပိန် eReader ၏သက်သေကို Energy eReader Max မှရရှိသည်
New Kindle Oasis, Amazon ၏ပထမဆုံးရေစိုခံ eReader